Semalt: कसरी Google लाई तपाईंको पृष्ठ प्रेम गर्न
Semalt: कसरी Google लाई आफ्नो पृष्ठ बनाउन बनाउन
वर्णनात्मक ट्याग र अल्ट टेक्स्ट प्रयोग गर्नुहोस्
उच्च-गुणवत्ता ब्याकलिंक्स र इन्टरलिंक्स
आकर्षक भिजुअलहरूको प्रयोग गर्नुहोस्
तपाईंको वेबसाइटको लोडिंग स्पीड सुधार गर्नुहोस्
अनौंठो वेबसाइट सामग्री
तपाईंको सामग्री बारम्बार अपडेट गर्नुहोस्
एक अनुकूलन योग्य वेबसाइट प्रयोग गर्नुहोस्
गुगललाई तपाईंको पृष्ठ मनपर्दो बनाउनु भनेको तपाईंको वेबसाईटहरूलाई खोज इन्जिनका लागि अनुकूलित गर्ने कला हो। (SEO) खोज इञ्जिन-मैत्री वेबसाइटहरू साइटहरू हुन् जसले गुगल जस्ता खोज ईन्जिनहरूको दाँया पट्टि रहन सबै गर्दछन्। एसईओ को मुख्य लक्ष्य भनेको तपाइँको वेबसाइटलाई खोज परिणामहरूमा अझ बढी देखिने बनाउनु हो।
यदि तपाईंको वेबसाइटले सधैं गुगल खोजी प्रश्नहरूमा धेरै पछाडि सिटहरू मध्ये एक लिइसकेको छ भने, ज्वार पल्टिन लागेको छ। यहाँ सम्म कि यदि तपाइँको साइट केहि राम्रो तरिकाले निष्पक्ष भएको छ, यी सुझावहरूले तपाइँको वेबसाइट मा पूरा गुगल मित्रता बदलाव दिन्छ। यहाँ Google लाई तपाइँको साइट प्रेम गर्न को लागी तरिकाहरू छन्।
मेटा विवरण, शीर्षक ट्यागहरू, र वैकल्पिक पाठहरू गुगल द्वारा तपाईंको वेबसाईटलाई माया गर्ने असंख्य तरिकाहरू छन्। तिनीहरू प्रायः HTML तत्वहरू हुन् जसले गुगललाई तपाईंको वेबसाइटको बारेमा अधिक जानकारी दिन्छ। जब गुगलको एल्गोरिथ्मले तपाइँको वेबसाइटमा अत्यधिक अनुकूलित सुविधाहरूको पत्ता लगाउँदछ, यसले शीर्ष खोजी इञ्जिन स्तर निर्धारणको लागि छान्छ।
मेटा वर्णन गुगल र गुगलका खोजी गर्ने व्यक्ति दुबैलाई तपाईंको वेबसाइटको एक सिंहावलोकन दिनुहोस्। यसले उनीहरूलाई थाहा दिन्छ कि तपाईंको साइटसँग उनीहरूले खोज्ने आवश्यक जानकारी छ।
शीर्षक ट्याग तपाईको वेबसाइटमा बनाउनु हुने प्रत्येक पोष्टको प्रमुख सुविधाहरू मध्ये एक हो। यो किनभने तपाईंको सामग्रीसँग सम्बन्धित कुञ्जी शब्द खोजी गर्दा यो दर्शकहरूले देख्दछन्। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको शीर्षक ट्याग सही तरीकाले गुगलका लागि अनुकूलित छ। यसले अतिरिक्त कुञ्जी शब्दहरू समावेश गर्नु हुँदैन; न त यो 60० क्यारेक्टरहरू भन्दा लामो हुनुपर्दछ।
Alt विशेषताहरू Google लाई तपाईंको वेबसाइटहरूमा छविहरूको बारेमा वैकल्पिक जानकारी प्रदान गर्दछ। यसले तपाइँको एसईओ लाई बढावा दिन र Google लाई तपाइँको वेबसाइटलाई बढी माया गर्न सक्छ। यस कारणका लागि, तपाईंको दृश्यमा छोटो कुञ्जी शब्द वर्णन हुनुपर्दछ। यी स्थानमा रहँदा, Google लाई तपाईंको वेबसाइट उच्च स्तरमा मद्दत गर्दछ।
धन्यबाद, तपाईं पेशेवर भर्ना गर्न सक्नुहुन्छ वेब विकास र एसईओ सेवाहरू तपाइँको साइटलाई पुन: सुधार गर्न।
उच्च-गुणवत्ता ब्याकलिks्कहरू र इन्टरलिks्कहरू प्रयोग गर्नुहोस्
<< डिव ब्याकलिlin्कहरू र इन्टरलिks्कहरू महत्त्वपूर्ण छन्। यदि तपाईं आफ्नो वेबसाइट गुगल को राम्रो पुस्तक मा हुन चाहनुहुन्छ भने। ब्याकलिks्कहरू र इन्टरलिks्कहरू Google को एल्गोरिदम भन्छ कि तपाईंको वेबसाइट अन्य वेबसाइटहरूको लागि मूल्यवान छ।
इन्टरनेट एक ग्लोबल गाउँ हो, त्यसैले विश्वव्यापी समुदायका सबै सदस्यहरू बीच एक आपसमा सम्बन्ध छ। अन्य पोष्टहरू र वेबसाइटहरू तपाइँसँग लिinking्क गर्दा तपाइँ त्यो गाउँको एक बहुमूल्य सदस्य हुनुहुन्छ भनेर देखाउँदछ।
तपाईसँग अन्य साइटहरू लि linked्क गर्न पर्याप्त छैन; लिंकहरू मूल्यवान हुनुपर्दछ। साथै, लिंकहरूमा तपाईंको पोष्टसँग सम्बन्धित जानकारी समावेश हुन आवश्यक छ। यसको मतलव तपाईले आफ्नो पोष्टमा चाहानु भएको कुनै लि link्क संलग्न गर्न सक्नुहुन्न। लिंकहरू उच्च गुणवत्ताको हुनु आवश्यक छ।
यो जान्न लायकको पनि छ कि तपाईंको वेबसाईटमा थोरै, महत्त्वपूर्ण लिंकहरू थपेमा थुप्रै विषाक्त लिंकहरू प्रयोग गरेको भन्दा बढी लाभदायक हुन्छ। तपाईंको पोष्टहरूमा उच्च अधिकार (राम्रो मुल्या .्कन गरिएको र प्राय: भ्रमण गरिएका साइटहरू) को लिंकहरू थप्ने प्रयास गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी, तपाईंको सामग्रीलाई अन्य पोष्टहरूमा लिंकको रूपमा प्रयोग गर्नका लागि पर्याप्त मूल्यवान छ।
साथै, तपाईंको लिंकहरूको लागि ए keywords्कर पाठको रूपमा कुञ्जी शब्दहरू प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यो Google एल्गोरिथ्मको लागि तिनीहरूलाई खोज्नको लागि सजिलो बनाउँदछ र तपाईंको खोजी इञ्जिनको श्रेणी बढाउँदछ।
केहि पनि मनमोहक छैन र चित्र, GIFs, memes, र भिडियो को रूपमा संलग्न; ती क्लिकहरु तपाइँको वेबसाइट मा आउन राख्नुहुन्छ। शंका गर्नुहुन्छ? Buzzfeed सोध्नुहोस्! जसरी व्यक्तिले यी ग्राफिक्स मन पराउँछन्, गुगल पनि गर्छ।
यदि तपाइँ तपाइँको ब्लगमा भिडियो, चित्र, र मनपर्दो बारम्बार प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, Google ले यसलाई उच्च स्तरमा राख्दछ। यो किनभने भिजुअलका साथ वेबसाइटमा व्यक्तिहरू लामो समयसम्म बसिरहेका छन्।
तपाईंको वेबसाइटहरूको लागि भिजुअलका साथ उत्तम प्राप्त गर्न, निश्चित गर्नुहोस् कि दृश्यहरू उच्च गुणवत्ताको छन्। धमिलो भिडियो, चित्र, र मनपर्दो को उपयोग नगर्नुहोस्। यो किनभने गुगल tackiness मन नपर्ने; यसले तपाईंको वेबसाइट कम खोज इञ्जिन स्तर निर्धारण कमाउन सक्छ।
साथै, छविहरू, भिडियोहरू, र तपाईंको नभएको अन्य दृश्यहरूको नक्कलबाट जोगिनुहोस्। यदि तपाईं तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न आवश्यक छ भने, निश्चित गर्नुहोस् तपाईंले भिजुअलको स्रोतलाई क्रेडिट गर्नुभयो। दृश्य स्रोतहरूको लागि उचित क्रेडिट बिना, गुगलले यसलाई चोरीको रूपमा अवलोकन गर्दछ र त्यसैले तपाईंको वेबसाइटलाई दण्डित गर्दछ। यी सबैको साथ पनि, तपाईं अझै पनि प्रतिलिपि अधिकार मुद्दाहरूको कारण छविहरूको प्रयोग गर्न सावधान हुनु आवश्यक छ। यदि सम्भव छ अन्य व्यक्तिको भिजुअल पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न वा सार्वजनिक चित्रहरूको प्रयोग गर्नबाट बच्न।
याद गर्नुहोस् Alt गुण नियमहरू पनि भिजुअलका लागि लागू हुन्छ। तपाईंको वेबसाइटमा उपयुक्त कुञ्जी शब्दहरूको साथ भिजुअलहरूको संक्षिप्त विवरण समावेश गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यसले तपाईंको गुगलको स्तर निर्धारण गर्दछ।
कीवर्डहरूको प्रयोग गर्नुहोस्
यस सुनौलो नियम याद गर्नुहोस्; तपाईंले आफ्नो कुञ्जी शब्द बिर्सनु हुँदैन। कुञ्जीशब्दहरू गुगल खोज परिणामहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि त्यो नै गुगलको एल्गोरिथ्मले लिन्छ र परिणामहरू उत्पन्न गर्दछ। यदि तपाइँ तपाइँको पृष्ठ शीर्ष परिणामहरु मध्ये एक चाहानुहुन्छ भने तपाईले यकिन गर्नु पर्छ कि तपाईका कुञ्जी शब्दहरु ध्यानपूर्वक अप्टिमाइज गरिएको छ।
यदि तपाई चाहनुहुन्छ भने तपाईको कुञ्जी शब्द उच्च गुणको हुनु पर्छ। उच्च यातायात उत्पन्न। अनुकूलित कुञ्जी शब्दहरूको बिना तपाईंको वेबसाइट सम्भावित ग्राहकहरूको लागि दृश्यात्मक हुनेछैन। कुञ्जी शव्दहरू तपाईंको शीर्षक ट्याग, वैकल्पिक पाठ, मेटा विवरण, र लिंकहरूको लागि आवश्यक छ। ती मुख्य पक्षहरू हुन् गुगलको एल्गोरिथ्म मार्फत ब्राउज।
तपाईको सम्भावित कुञ्जीशब्दहरूको अनुसन्धान गर्ने बेला सँधै सान्दर्भिक किवर्डहरू छनौट गर्नुहोस्। जब व्यक्तिहरू तपाईंको कोठामा सूचना खोजी गर्न चाहन्छन्, आवश्यक कुञ्जी शब्दहरू के हुन् जुन उनीहरूले कहिले पनि छोड्न सक्दैनन्? कुञ्जी शब्दहरूको रूपमा समावेश गर्नुहोस्।
साथै, समय समयमा तपाईंको कुञ्जी शव्दहरूको प्रदर्शन मूल्या to्कन गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, यसले तपाईंलाई उनीहरू परिवर्तन गर्न आवश्यक छ कि छैन भनेर बताउँछ। अधिक, कुञ्जी शब्दहरूको अत्यधिक संख्याको साथ तपाईंको सामग्री स्पाम नखोज्नुहोस्। यो तपाइँको वेबसाइट को विरुद्ध काम गर्न सक्दछ। Div>
तपाइँको वेबसाइटको लोडिंग स्पीड सुधार गर्नुहोस्
तपाइँको वेबसाइट लोडिंग गति गुगलसँग तपाईंको सम्बन्ध निर्धारण गर्ने अर्को कारक हो। तपाइँको वेबसाइट लोड हुन कति समय लाग्छ? के अधीर आगन्तुकहरू तपाईंको वेबसाइटमा हतार गर्न र छिटो पहुँच गर्न सक्दछन्, वा तपाईंको वेबसाइटले वर्षौं लिन सक्दछ?
सुस्त लोडि time गर्ने समयका वेबसाइटहरूले प्रायः मानिसहरूलाई रिस उठाउँछन्, तर गुगलले त्यसलाई अझै घृणा गर्दछ, र यसले अन्ततः तपाईंको पृष्ठको रैंकिंगलाई कम गर्न सक्छ। यसको मतलव तपाईले जैविक यातायात गुमाउनुहुनेछ। अर्कोतर्फ, द्रुत लोडि rate दरले तपाईंको वेबसाइटलाई खोजी परिणामहरूमा बढी देखनीय बनाउँदछ र ट्राफिक बढावा दिन्छ।
यदि तपाईंको साइट यो भन्दा कम ढिलो लोड हुन्छ भने, तपाईंले बग मुद्दाको साथ व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ। यो हुन सक्छ कि तपाइँको साइट मा दृश्यहरु तपाइँको वेबसाइट को क्षमता को लागी धेरै ठुलो छ। त्यहाँ अन्य कारणहरू पनि हुन सक्छ। Semalt बाट पेशेवर मद्दतको साथ, तपाईं यी सबै मुद्दाहरूको समाधान गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको वेबसाइटको लोडिंग समय द्रुत गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईं गुगललाई आफ्नो वेबसाइट मनपर्दछ भने, हैन भन्नुहोस्। नक्कल वा चोरी लेख। गुगलले घृणा गर्दछ कि यसको सट्टा रचनात्मक र मूल सामग्रीको लागि अप्ट गर्नुहोस्। यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि गुगलले फरक याद गर्दैन, पुन: सोच्नुहोस्। गुगलसँग परिष्कृत एल्गोरिदमहरू छन् जसले सजीलै असंगुलित र जानकारीहीन पाठहरू बाहिर निकाल्छ।
तपाईंले अनौपचारिक सामग्रीबाट टाढा रहनु पर्छ किनभने यसले तपाईंको खोजी ईन्जिनको स्तर कम गर्न सक्छ; गुगल एल्गोरिथ्म तपाईको वेबसाइट मा प्रस्ताव को लागी केहि छैन लाग्नेछ। तपाइँको वेबसाइटको लागि मूल सामग्री लेख्दा पनि, तपाइँले यो सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ कि यो आकर्षक र मनोरन्जनात्मक छ। तपाईंको सामग्री पढ्न तपाईंको साइटमा अधिक समय पाठकहरू खर्च गर्दछन्, तपाईंको स्तर उच्च छ।
पाठकहरूलाई तपाईंको पृष्ठमा फिर्ता राख्नको लागि सबै सम्भव गर्नुहोस्। किन? गुगल एल्गोरिथ्म विश्वास गर्दछ कि तपाइँको वेबसाइट पर्याप्त जानकारीपूर्ण छ संभावित पाठकहरु को लागी अत्यधिक देखिने को लागी।
सही सामग्रीको प्रयोग तपाईंको सामग्रीमा पनि महत्त्वपूर्ण छ। यसले गुगलको एल्गोरिथ्मले तपाईंको पृष्ठलाई शीर्षमा ल्याउँदछ जब मानिसहरूले ती कुञ्जी शब्दहरूको लागि खोजी गर्दछन्। सहि कुञ्जी शव्द बिना, तपाइँको वेबसाइट लुकी रहन सक्छ।
तपाइँको सामग्री बारम्बार अपडेट गर्नुहोस्
ताजा सामग्री को उपयोग Google को हृदय चोर्न को एक तरीका हो। समय-समयमा र सकेसम्म धेरै पटक, तपाईंको वेबसाइटमा नयाँ सामग्री पोष्ट गर्नुहोस्। यसले गुगलको एल्गोरिथ्मलाई भन्छ कि तपाइँको वेबसाइट अझै सक्रिय छ। यो तपाइँको पाठक र ग्राहकहरुलाई अ h्कुचित राख्नु पनि एक प्रभावकारी तरीका हो।
तपाईंले आफ्नो वेबसाइटमा ब्लग सेक्सन समावेश गर्नुपर्दछ यदि तपाईंसँग एउटा छैन भने। यो तपाइँको आगन्तुकहरु संलग्न र वेबसाइट सक्रिय राख्छ। इन्टरवेबर्स प्रायः ब्लगले कसरी तपाइँको साइटलाई गुगलमा राम्रो साइटमा राख्न मद्दत गर्दछ भनेर कुरा गर्छन्।
तपाईंले नियमित रूपमा आफ्नो वेबसाइटमा अद्वितीय नयाँ सामग्री प्रकाशित गर्नुभयो भन्ने तथ्यले तपाईंको वेबसाइटलाई खोज परिणाममा पहिलो केही पृष्ठहरूमा धकेल्नेछ। यसलाई माथि धकेल्न, निश्चित गर्नुहोस् कि सामग्री संलग्न गरिएको छ, मूल हो, र सम्बन्धित कुञ्जी शब्दहरू समावेश गर्दछ।
यो ठीक छ यदि तपाईं आफ्नो वेबसाइटको लागि प्रायः अत्यधिक आकर्षक सामग्री लेख्न असमर्थ हुनुहुन्छ भने, Semalt लाई तपाईंको पक्षमा ह्याण्डल गर्न दिनुहोस्।
तपाईंलाई एक उत्तरदायी साइट चाहिन्छ जुन गुगलको एल्गोरिथ्मको परिष्कृत स्वादको साथ राख्नका लागि अनुकूल छ। आजकल, इन्टर्नेट सक्षम उपकरणहरू विभिन्न आकारमा आउँछन्। तपाईंको वेबसाइट जुनसुकै उपकरणले पहुँच गरिरहेको छ रूप लिनको लागि पर्याप्त अनुकूलित हुनुपर्दछ।
यदि तपाईं यसो गर्न सक्नुहुनेछ भने, तपाईं गुगलको हृदय चोर्नुहुन्छ र यसको सम्भावना बढी हुन्छ। खोजी परिणामहरूमा उच्च श्रेणीकरण। किन? अधिकांश व्यक्तिहरू आफ्नो उपकरणको लागि उत्तरदायी नभएको वेबसाइटमा पहुँच गर्न प्रयास गर्दा तिनीहरूको समय बर्बाद गर्न सक्दैनन्। तिनीहरूले त्यो तनावको सामना गर्दैनन्; यसको सट्टामा, तीनीँ उत्तम वेबसाइट पहुँच गर्न तपाइँको वेबसाइट छाड्नेछन्।
यसैकारण तपाइँको वेबसाइट जुनसुकै उपकरणले पहुँच गरिरहेको छ, अनुकूल गर्नको लागि प्रोग्राम गर्नुपर्दछ; यसलाई मोबाइलमैत्री बनाउनुहोस्। अनुकूलन साइटहरूले अनुसन्धान परिणामहरूको पहिलो केहि पृष्ठहरू भर्दछन् जब गैर-अनुकूलन साइटहरू पछाडि सीटहरूको लागि लाममा सामेल हुन्छन्।
बीचको भिन्नता भन्न सजिलो छ। गुगल मैत्री वेबसाइटहरु र साइटहरु होईन। गुगल मैत्री साइटहरु उच्च रैंक र अधिक यातायात लाभ; यसैले हरेक वेबसाइट मालिकले गुगललाई आफ्नो साथी बनाउन चाहान्छन्। माथिको सल्लाहहरू अनुसरण गर्दा तपाईंलाई तपाईंको साइटलाई पुन: सुधार गर्न र गुगललाई तपाईंको साइटलाई माया गर्न मद्दत गर्दछ। अधिक के हो, तपाईं पनि आफ्नो को लागी दृश्यता प्राप्त।